Nagu saabsan - Hemgrinder
Hemgrinder waa sumadda Shenzhen Gesheng Technology Co., Ltd.
Hemgrinder waxaa ka go'an hawl fudud: in la bixiyo qiimaha ugu hooseeya, alaabada ugu tayada sareysa, iyo waliba astaamo horumarsan iyo naqshad heer sare ah!
Waxaa jira 20 mashiin wax lagu duro oo irbado ah, 20 mashiin wax lagu tuuro, feer culus, sax ah CNC lathe, oo soo saaris sanadeed ah 20 milyan. Badeecada wax soosaarka ilaa keenida waa la baarayaa, qiimaha iyo tayada ayaa leh faa iido buuxda! Alaabooyinkeena ayaa la iibiyaa adduunka oo dhan waxayna ku raaxeystaan ​​sumcad wanaagsan. Daacadnimada, awooda iyo tayada wax soo saarka Hembrinder waxaa aqoonsaday warshadaha. Waxaan rajeyneynaa inaan ka helno iibiyayaal badan oo ka kala socda waddamo kala duwan.
Waa mabda 'ahaan in aan yareyno qiimaha, aan hagaajino tartannada suuqa oo aan gaarno waxtarka labada dhinac iyo natiijooyinka guuleysiga. Tayada koowaad, ugu horraysa macaamiisha, diirad saarida sharafta, horumarka iyo hal-abuurka ayaa ah qormadeenna. Soo dhowee hagida iyo isdhaafsiga asxaabta wershadaha!
Tan iyo markii la aasaasay, astaanku wuxuu u hoggaansamayaa saddex wanaag "tayo, kalsooni macaamiil, adeeg wanaagsan" ujeedooyin adeeg. Si loo daboolo baahida suuqa loona ilaaliyo danaha macaamiisha
Falsafadda meheradda: sharafnimada, heer sare, guul-guuleysiga!
Fikradda adeeg: dhammaan adeegsadayaasha ayaa ah udub-dhexaadka!
Dib-u-eegida wixii la soo dhaafay, waxaan nahay dad kalgacal badan, mustaqbal rajo leh, kalsooni badan ayaan ku qabaa! Hemgrinder had iyo jeer waxay qaadataa shahaadada shirkada ee "raacida tayada kaamil ah iyo abuurista moodada caadiga ah", oo leh dabeecad adeeg daacad ah, nidaam adeeg oofiican iyo ruux cusub oo hal abuur leh.
Ku soo dhowow macaamiisha inay yimaadaan si ay ugala hadlaan, u baaraan una hagaan!